Mpanakanto Mpanao Sary Mandefa Fanentanana Ety Anaty Aterineto Ho ‘Fanafahana Ny Media’ Ao Malezia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Marsa 2016 12:09 GMT
Vakio amin'ny teny English, Swahili, Español, বাংলা, русский, Ελληνικά, 繁體中文, 简体中文, English
Sary avy amin'ny Grupa
Nandefa saribe iray tety anaty aterineto ny vondrona iray ahitàna ireo mpanakanto mpanao sary ao Malezia hitakiana ny fahalalahan'ny media taorian'ny nandidian'ny governemanta ny fanakatonana tranonkala sy bilaogy marobe izay nitatitra momba ny tantara ratsy iray momba ny kolikoly mahavoarohirohy ny praiminisitra.
Nolazain'ny Grafik Rebel Untuk Protes & Aktivisme (Grupa) fa tanjon'ilay fanentanana ny hanaingàna ny fanahin'ny olona hanohana ny asan'ireo mpanao gazety miasa amin'ny tsy miankina :
Tsapanay fa tonga izao ny fotoana ho an'ny Maleziana mba hitakiana ny fahalalahan'ny media sy ny aterineto, raha jerena tamin'ireo fanafihana faramparany nanjo ny fahalalahana maneho hevitra eto Malezia. Noho ireny tetikady ireny dia niatrika fotoana sarotra ny mpanao gazety maro avy amin'ireo vavahadin-tserasera tsy miankina rehefa manangona vaovao momba ireo mpanao lalàna avy amin'ny antoko eo amin'ny fitondràna, ary ireo mpanangona vaovao avy amin'ireo media mahazatra dia mazàna no antsoina ho alika kely mpandray baikon'ny governemanta.
Hatramin'ny Janoary, tranonkala telo no nobahanan'ny governemanta Maleziana ary bilaogy telo miresaka sosialy sy politika. Nobahanany ny tranonkalam-baovao “Medium and Asia Sentinel” noho ny namoahany tatitra iray izay ny Sarawak Report no namoaka azy voalohany, momba ny tantara ratsin'ny kolikoly mahavoarohirohy ny Praiminisitra Najib Razak. Voarara tao Malezia ny Sarawak Report tamin'ny 2015. Roa herinandro lasa izao, voabahana ny “Malaysia Insider” noho ny filazàna azy ho nandefa vaovao ‘tsy voamarina’ momba ilay raharaha kolikoly miresaka an'i Najib.
Ampangaina i Najib ho nandray 600 tapitrisa dolara amerikàna taminà orinasa iray mpampiasa vola tantanan'ny fanjakàna. Lavin'i Najib io ary milaza izy fa fanomezana ara-politika avy amin'ny fianakavian'ny mpanjaka ao Afovoany Atsinanana ny vola any amin'ny bankiny. Niteraka hetsipanoherana goavana tao Malezia ilay olana, ary ny sasany tamin'ireo mpiaradia tamin'i Najib aza nitaky mihitsy ny hametrahany fialàna.
Mino ireo mpikatroka mafàna fo sy ireo mpitarika ny mpanohitra fa ny fampitsaharana ny sasany tamin'ireo gazety ary ny fibahanana tranonkala dia ampahany amin'ny ezaky ny governemanta hanafina ireo vaovao momba ilay raharahanà kolikoly.
Na ireo mpampiasa media sôlsialy koa aza dia ataon'ny manampahefana lasibatra. Voabahana ny bilaogy OutSyed The Box, Din Turtle sy Minaq Jingo Fotopages noho ny fanakian-dry zareo ny governemanta. Rahonan'ny Kaomisiona Maleziana momba ny Fifandraisana sy ny Multimedia na “Malaysian Communications And Multimedia Commission (MCMC)” ireo mpisera amin'ny aterineto mizara ireo sary mahatsikaiky mahakasika an'i Najib. Ny mahazendana, ny Grupa koa nankalaza ho an'ny besinimaro ireny sary mahatsikaiky ireny taorian'ny nampitandreman'ny polisy ny mpanakanto iray mpikatroka mafàna fo izay taty aoriana dia narahana maso akaiky noho ny fibitsihany sary iray mahatsikaiky misy an'i Najib.
Ny fanentanan'ny Grupa ho fanoherana ny sivana dia manandratra ny tenifototra #‎freethemedia sy #‎bebasmedia (afaho ny media)‬.
Ireto ambany ireto ny sasany amin'ireo saribe nakarina tao amin'ny pejy Facebook sy Twitter an'ny Grupa :
Ambaran'ny Grupa fa ny media dia tsy tokony fotsiny handefa ny fampielezankevitry ny governemanta, indrindra fa ireo izay avy amin'ny biraon'ny praiminisitra (PMO). Sary avy amin'ny Grupa
Na iza na iza mifehy ny media, dia mifehy ny fisainana #BebasMedia #AfahoNyMedia
Angatahan'ireo mpikatroka mafàna fo ny hamerenana ny fandinihana ilay lalàna lany tamin'ny 1998 nanome fahefana midadasika ho an'ny Kaomisiona Maleziana momba ny Fifandraisana sy ny Multimedia (MCMC) hanivana sy hibahana tranonkalam-baovao. Sary avy amin'ny Grupa